Akụkọ - Kedu otu esi ahọrọ ọla na nzukọ kwa afọ?
More nkowa na-aga Alibaba anyị: https: //maijiao.en.alibaba.com
24 AKA RHINESTONE MESH
24 BOWR R RHINESTONE MESH N’AGHTR R RHINESTONE
Pear igwe ntupu
PKỌKỌ EBERE Plastịs
KPỌỌ NA RHINESTONES
SINGING AH R
Kedu otu esi ahọrọ ọla na nzukọ kwa afọ?
Mgbe ememme oge opupu ihe ubi na-abịa, gịnị ka a ga-ezigara ndị TA iji mee ya obi ụtọ ọbụna ọchị n'ihu ya? Lingling na-agwa gị na ọla dị oke ọnụ ahịa zuru ezu. Ihe ọla dị iche iche pụtara na-anọchi anya ịhụnanya nzuzo okwu dị iche iche. You nwere ike ịkọ ma TA nwere ike ịkọ eziokwu?
Olu - .hụnanya
Kedu nwa agbọghọ na-ahụghị ịhụnanya nwoke na nwanyị n'anya? Naanị oge kwesịrị ekwesị, zigara ya ihe olu ejiri nlezianya họrọ. Na mgbakwunye na “ịhụnanya,” otu olu nwere ụdị ịhụnanya ọzọ, “Achọrọ m iji obi gị kee ihe obi gị ma ghara ịnara ndị ọzọ.” Rationzọ nlezianya dị otú ahụ nke na-adịghị ike na nke ịchịisi ga-atọ ya ụtọ.
Crystal pink ntụ ntụ ụtọ na ọ bụghị kegriiz, dị ka mmekọrịta dị ụtọ n'etiti ha abụọ, e nwere ifuru na-adabere na ifuru, kristal Jade nke a usoro mosaic jed bụ ezigbo adabara enyi nwanyị.
Mgbaaka - Onye nlekọta
Kedu ụmụ agbọghọ achọghị ka ịhụnanya ha na-adịte aka? Ma eleghị anya, ọnọdụ ya n'ime obi gị bụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe, mmetụta gị dịkwa oke mkpa na nlekọta. Kaosinadị, ị ga-ekwupụta ihe dị gị n’obi, mee ka ọ mara, ma mee ka obi ruo ya ala. Ziga ya mgbaaka, nke pụtara “chekwaa ịhụnanya,” na-egosipụta ọchịchọ ya ịkechi ya ruo oge ndụ ya niile na ndụ ya niile.
Ọ ka mma iziga ya mgbaaka amethyst crystal, amethyst bụ "nkume nchekwa nke ịhụnanya", nke pụtara ihe dị mma, dị mfe ma na-agbanwe agbanwe, yabụ ọ mara mma ma maa mma.
Mgbaaka - mgbanaka maka ịhụnanya
Kedu nwa agbọghọ na-achọghị nkwa ndụ ya niile? Ọ bụrụ na ọ bụ onye ị chọrọ ka “tinye mkpịsị aka gị aka, mee ya ochie,” hapụ ya ka ọ chere ogologo oge, kpuchie ya mgbanaka, ma gosipụta ezi obi na ezi obi ya “hụ ya n’anya. N’ime obi m, a ga m adị njikere ịhapụ ịhụnanya ya, ”na-enye ya alụmdi na nwunye obi ụtọ.
Yiri mgbaaka yiri obi Ruby kristal, site na nke ị ga-ekwenye na ịhụnanya na ibe gị.
Ememme, ziga ya ọla ọla gemstone
Onyinye mara mma ma nwee isi
Ọ dị mkpa ime ya obi ụtọ
Kedu ihe kwesịrị ekwesị karịa nke a?
Post oge: Jun-20-2018
Adress:Isi ụlọ ọrụ ： Mba. 16, Waidaling, Daling Village, Yisanli Street, Yiwu City, Zhejiang Province, China
Ekwentị efu: 0086 13958400086